Ciidamada Itoobiya ayaa gudaha ugalay Deegaanka Wela-weyn ee Gobolka Sh/Hoose | maakhir.com
Ciidamada Itoobiya ayaa gudaha ugalay Deegaanka Wela-weyn ee Gobolka Sh/Hoose
Wela-weyn:- Ciidamada Dawlada Itoobiya oo Kaashanaya kuwa Dalka Somaliya ayaa weerar buuxa ku qaaday Goob la sheegay inay ku dhuumaalaysanayaan kooxo xidhiidh dhaw la leh Maxaakiimtii Islaamiga ahaa ee awoodooda laga wiiqay Koonfurta Dalka Somaliya, meel u dhawa Degmada wela-weyan ayay maanta weerar xoogan ku qaadeen ciidamadaasi is gaashaan buursaday.
Goobtaasi ay ciidamadu sida wajirka ah u weerareen ayaa waxa la sheegay inay Magaalada wel-weyn u jirto 70Km ee Gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo la sheegay in ciidamada Itoobiya iyo cutubyo ka tirsan Ciidanka Dowladda weerareen fariisimahaas ka dib markii la sheegay inay halkaasi gabaad ka dhigteen Kooxo la la cadeeyay inay xidhiidh la leeyihiin Maxaakiibtii Islaamiga ahaa.
Warar is khilaafsan ayaa goobtaasi ka soo baxay iyada oo sida naloo sheegay Isgaarsiinta Goobtaasi ay hawda ka Maqantay ka dib markii ay jareen Ciidamada Dawlada Itoobiya oo goobtaasi maanta Fadhiisan ka samaystay.
Warar dheeraad ayaa iyana sheegay inay ciidamada Dawlada Itoobiya oo dusha ka Ilaalinayaa Diyaaradaha dagaalku ay galeen Deegaanka Goobaale ee isla Gobolka Shabelada Hoose,iyada oo waliba la xaqiijiyay in Kooxihii halkaasi joogay laga saaray walaw aan la sheegin khasaaraha halkaasi ka dhacay inta uu leg yahay.
« C/laahi Yuusuf farta ku fiiqay inay Dalka Somaliya joogaan Al-Qaacida
Shir lagaga hadlay Xaalufka oo ay soo qaban qaabiyeen Dalada HON ayaa ka dhacay Degamada Dhahar ee G/ Sanaag »